China RCL-2118 LED Linear Khanyisa ifektri abakhiqizi | Ukunethezeka
Uhlobo lwe-cir-clip high-efficiency isibani se-LED, umzimba wesibani se-aluminium alloy, ukuqhutshwa okuqinile kokushisa
futhi akukho ukusonteka, kuthuthukisa ngempumelelo impilo ye-LED magic ubuhlalu.
Ukufakwa kwe-Spring card Orifice, ene-lampshade, izinhlangothi ezintathu ezingaphezulu nangaphansi ezingezansi zikhanyisiwe
sebenzisa ukujova ukuphela kwangemuva kwe-21mm laminate, ukujula kuxhunywe ekujuleni okujwayelekile-13mm
Kusetshenziswe phakathi kwamakhabethe, buyisela amakholomu amaRoma.
Nakani igebe eliphakathi kwamapaneli omnyango ezinhlangothini zombili
Ingafaka kumakhabethe ekhishi, ikhabethe, ikhabethe lokugeza namanye amakhabethe adinga ukukhanya phakathi kwamakhabethe.
Ukufaka ikhadi le-Spring Orifice
Izinzuzo zezibani eziqondile ze-LED
1, ukonga amandla okuphezulu
Amandla okonga ugesi alondoloza imvelo ngaphandle kokungcola. Ukushayela kwe-DC, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi kwe-electro-optical amandla okusondela ku-100%, umphumela wokukhanyisa ofanayo ungaphezu kuka-80% wokonga amandla kunemithombo yokukhanya yendabuko.
2, impilo ende
Umthombo wokukhanya oqondile we-LED ubizwa ngokuthi ukukhanya kwesikhathi eside, okusho ukukhanya okungacimi. Umthombo wokukhanya okubandayo oqinile, i-epoxy resin encapsulation, ayikho ingxenye evulekile emzimbeni wokukhanya, akukho ukushiyeka kokukhanya kwe-filament, okulula ukushisa, ukuthunyelwa okushisayo, ukubola kokukhanya, njll., Futhi impilo yensizakalo ingafinyelela kumahora angama-60,000 kuya ku-100,000 , ubude bayo buphindwe kayishumi kunemithombo yokukhanya yendabuko. ephezulu.
Q: Singakwazi ukukhetha noma yikuphi ubude bamalambu omugqa?
Impendulo: Yebo, singakhetha noma yiluphi usayizi isibani komugqa ngokuya ngezidingo zakho. Sicela usitshele izidingo zakho.
Q: Ingabe unikeza iziqinisekiso ngemikhiqizo?
A: Yebo, kunikezwa iwaranti yeminyaka emithathu. Uma unemibuzo, sicela uxhumane nomthengisi wethu ngesikhathi
Q: Mayelana nesikhathi sokulethwa?
Imvamisa, isikhathi sokulethwa siyizinsuku zokusebenza eziyi-10-15. Ngokuya ngezidingo zakho, uma sidinga ukuklama isiteshi esisha se-aluminium alloy, kuzothatha isikhathi esithe xaxa
Q: Unganikeza ngamasampuli athile?
A: Yebo, singanikeza amasampula mahhala, futhi izindleko zokuthumela zithwalwa nguwe.
Umbuzo: Singakwazi yini ukwenza ngezifiso izibani zomugqa esizidingayo
A: Yebo, sicela usitshele izidingo zamalambu elayini ngokuningiliziwe, noma imidwebo. Kubandakanya inani lobuhlalu besibani obusetshenzisiwe, ukukhetha ukukhanya kwemvelo, ukukhanya okufudumele noma ukukhanya okubandayo. Sizokunikeza isisombululo esikahle kakhulu.
Q: Ingabe kukhona ubuncane be-oda elincane le-oda?
A: I-MOQ ephansi, intengo nayo ingaxoxisana ngokuya ngobuningi bakho.
Langaphambilini Iphrofayili engu-RCL-2518 ye-LED ehamba phambili ekhanyayo
Olandelayo: I-RCL-2420 Light Linear ekhanyiswe emuva